Pane imwe nguva, kusunungura mitambo kubva kuOculus Kuda kana Oculus Kutsvaga 2 zvaizoita kuti urasikirwe nemasave emutambo wako. Kana wanga uchingosunungura nzvimbo ye akanakisa Quest 2 mitambo kana kuti wanga uchiedza kukwidziridza musoro wako kubva kuOculus Kuda kuenda kuOculus Kuda 2, kurasikirwa nemutambo wako kunotyisa nekuti zvinoreva kuti ucharasikirwa nekufambira mberi kwako kwese mumutambo. Nekuda kweOculus gore rinochengetedza, hauchafanira kusarudza pakati pemahara nzvimbo paKuda kwako uye kuchengetedza mutambo wako. Heino maitiro ekuita kuti izvi zvisaitike kwauri.
Maitiro ekugonesa kuchengetedza kwegore paOculus Quest
Isa pane yako Oculus Kuda uye tinya iyo bhokisi reimba parudyi controller kuunza iyo universal menu.
Sarudza iyo wachi/settings panel kuruboshwe rwemenyu bar pazasi.
sarudza Settings kubva pakurongwa.
sarudza negadziriro yeparutivi kubva kumenu yekuruboshwe.
Ita shuwa kuti Cloud backup inobatidzwa. Iyo toggle ichave yeblue kana yabatidzwa.
Nekuchengetedza kwegore kunogoneswa, chero mitambo yakaiswa inotsigira kuchengetwa kwegore inozodzosera otomatiki iwo mafaera kuOculus account yako.
Maitiro ekugadzirisa yako Oculus gore inochengetedza
Kamwe gore backup yagoneswa, ese emitambo inochengetwa pahedhiseti yako inozodzoserwa otomatiki kuaccount yako yeOculus yekuchengetedza zvakachengeteka. Ndiko kuti, hongu, sekunge app yako kana mutambo wesarudzo uchitsigira cloud backup. Kuti uone kuti mutambo kana app ine data rayo rakachengetwa rakatsigirwa, unozofanirwa kuvhura webhu browser uye woenda kuwebhusaiti yeOculus. Izvi zvinogona kuitwa paKuda 2, pane yako smartphone, kana pane chero komputa.
Open ari web browser uye famba uchienda ku Oculus webhusaiti.
Sarudza iyo mufananidzo icon kumusoro-kurudyi kwepeji. Ungangoda kupinda neyako Facebook Oculus account kutanga.
sarudza mano kubva kumenyu inoonekwa.
sarudza Cloud Backups kubva kumenu kuruboshwe.
Rondedzero ye mitambo yakatsigirwa ichaonekwa ichiratidza iyo yekupedzisira-backup nguva uye saizi ye backup.
Iwe unogona kuona kuti app kana mutambo unotsigira Cloud backup nekutarisa iyo Inotsigira Backup column.
Kana iwe uchida kubvisa iyo backup yegore yemutambo, tinya iyo Kudzima bhatani remutambo iwoyo.
Kana iwe uchitsvaga kusunungura nzvimbo pane yako Oculus Kuda, ita shuwa kuti iwe unongobvisa maapplication kana mitambo inotsigira Cloud backup. Zvikasadaro, iwe unorasikirwa nedata rese reapp rakabatana nemazita aya, sezvo chengetedza mafaera asina kuparadzaniswa paKuda. Izvi zvinoreva kuti kana iwe wafambira mberi zvakanyanya mumutambo usingatsigire masevha egore, kuburitsa mutambo iwoyo kunozoita kuti masevha emutambo wako abviswe.
Oculus gore rinochengetedza sei basa?
Paunenge uchifambira mberi mumutambo kana kuchengetedza mafaera muapp paOculus Kuda kana Oculus Kuda 2, iwo mafaera ekuchengetedza ari munzvimbo imwechete iyo mutambo kana app inogara. Izvi zvinoreva, kana iwe ukabvisa mutambo kana app, iyo folda yese yemafaira inobviswa, kusanganisira chero yakachengetedzwa mutambo kufambira mberi kana mafaera.
Oculus gore rinochengetedza basa nekutsigira iyi data yakachengetwa kuaccount yako yeOculus, zvichikubvumidza kuti usunungure mazita pasina kunetsekana nekurasikirwa nekufambira mberi kwako. Asi haasi ese maapplication nemitambo anotsigira gore chengetedza izvozvi. Ndosaka zvakakosha kuve nechokwadi chekuti maapplication ako kana mitambo ine mafaera akachengetedzwa akatsigirwa nekutevera dzidziso iri muchikamu chiri pamusoro.
Paunodzosera zvakare app ine gore backup, iwo mafaera-anotsigira anozotorwa otomatiki kuOculus Kuda kwako panguva yekuisa. Nenzira iyoyo haufanirwe kunetseka pamusoro pekuti zvakachengetwa ndizvo here kana kuti kwete.
Zviwanire zvese mune imwe
$ 299 ku Amazon
$ 299 pa Best Buy
$ 299 paWalmart
Kutakurika hakuna kumbova nesimba rakadaro
Iyo Oculus Kuda 2 ndiyo yakanakisa VR yemitambo system pamusika, ine inoshamisa, inonyudza mitambo inokuendesa iwe kunyika itsva.